Faallo: Amerika iyo doorashadii lama filaanka ahayd ee Trump! – Kasmo Newspaper
Faallo: Amerika iyo doorashadii lama filaanka ahayd ee Trump!
Updated - November 11, 2016 12:13 pm GMT
Dalka Maraykanka wali lagama fara xalan doorashadii ugu shuddada iyo xamaasadda weynayd taariikhda oo dhex martay Marwo 1aad oo hore, Hillary Clinton iyo ganacsade maal qabeen ah, Donald Trump, waxaana socda, habeenkii 2aad oo dibadbaxyo ah.
Iyadu waxay la soo noolaatay waayaha Aqalka cad, markii odeygeeda Bill Clinton ka soo ahaa madaxweynaha, waxayna markii dambe ku biirtay golayaasha siyaasadda qaranka, waxayna soo qabatay jagada 3aad ee ugu muhimsan dalka.
Isagu waa markii u horreysay oo uu siyaasadda soo galo, waxaana lagu yaqiin ganacsiga, gudaha iyo dibadda dalka, waana nin an lahayn khibrad shaqo oo dowladeed. Laakiin wuxuu ku guulaystay in uu noqdo madaxweynihii 45aad ee Maraykanka, waliba si lama filaan ah, waxaana khaldamay dhammaan saadaalihii kala duwanaa ee ilaa 8dii Nofembar la sameeyay oo idil.
Waayo intii uu socday ololihii dheeraa ee labada musharrax iyo taageerayaashooduba ku xiiqeen, aqlabiyadda aamusani waxay ku fakaraysay in ay codkooda siiyaan madaxweynaha guulaystay.
Gaar ahaan dadka caddaanka ah ee ka soo jeeda dabaqadaha dhexe iyo hoose, kuwaas oo uu la dagay ciriiriga dhaqaale iyo waxyeellada gurracan ee isu furanka dunida (Globalization). Iyo waliba cabsida ay ka qabaan in ay arkaan Amerika oo gacanta u gashay dadka laga tirada badanyahay.
Maalmaha soo socda waxaa laga hadli doonaa iinaha Clinton, wixii ka khaldamay ololeheeda iyo waliba saamaynta warqaddii madaxa FBI ku sheegay in dib loo furayo kiiskeedii mail-gate.
Laakiin shaki ma laha in ay jiraan arrimo xaqiijiyay guusha lama filaanka ah ee musharraxa Jamhuuriga, taas oo ku timid mowjado dabaylo ah oo ka fac weyn xitaa Maraykanka qudhiisa.
Dabaylahaas oo ah kacaan dadweyne ka duulaya (populism) oo ku socda dhiig cunsurinimo iyo qaran-doon (nationalism), oo ku dulmaray Britain aftidii Brexit, ka dibna u sii gudbay xeebaha Amerika.
Waana ifafaalaha siyaasadeed ee cusub ee ka jira dunida reer Galbeedka, waayadaan, midka hoosta ka xarriiqaya guusha Trump ee Aqalka cad.
Labada arrimood ee istrateejiga u noqdayna waa: abaabulka dadka caddaanka ah iyo taageeradii Clinton ka weyday madowgii iyo Latino-gii laga tirada badnaa. Kuwaas oo intooda badan u arkayay Hillary Clinton mid u taagan nidaamkii looga soo horjeestay kacdoonkii Dimuqraadiga gudihiisa uu ka bilaabay Bernie Sanders (anti establishment) oo halkiisii ka sii socda.
Dalka Maraykanka waxaa soo maray madaxweyne madow, mar ay noqotana wuxuu yeelan doonaa mid haween ah, nasiib darro-se ma noqon Hillary oo iyada hadda lagu waday.
Waxaa guuldarradeeda la dhimatay rajadii ahayd in Amerika aragto haweenaydii u horreysay oo iyada oo madaxweyne ah ka soo toosta Aqalka cad, laakiin waxay taariikhda ku gali doontaa xitaa guuldarradii siyaasadeed ee ugu xumayd dalka.
Donald oo ah nin is tustus badan (showman), wuxuu ballanqaaday in uu dib u dhisi doono “Ameerikadii weynayd”, inkasta oo dadka qaar u arkaan hal-kudhiggaas mid uu ula jeedo in uu dalka dib ugu soo celiyo gacanta caddaanka, ka dib madaxweynihii madoobaa ee u horreeyay taariikhda Maraykanka oo Jenaayo 2017ka xafiiska bannaynaya.
Akhri sheeko la xiriirta:kulankii-u-horreeyay-ee-obama-trump-oo-aqlka-cad-ka-dhacay/